Sidee afdheer looga dareemay isticmaalka MOBILE -ka iyo ballanqaadkii madaxweynaha DDS itoobiya 1aad hirgalay.
Sabti, 12 October 2013 12:21 | Qoraaga: Tafatiraha | Hargeelle ( afdheer) degmooyinka uu Ka kooban yahay gobolka afdheer(10 degmo ) ayaa dhawaan loo siidaayey khadka mobilka kadib markii uu gaaray deegaankaas xiriirintii khadka telefoonada Mobile-ka gobolka afdheer wuxuu xuduud dheer la leeyahay inta u dhaxeysa Doolow illaa Qalaafe xuduudda dalka Soomaaliya wuxuuna ku yaal koonfurta fog ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya inta badan degmooyinka gobolkan ayaa hadda laga isticmaalayaa telefoonka gacanta. Dim lights
Gobolkan wuxuu ka mid yahau 3da gobol ee ugu abniga wanaagsan deegaanka Soomaalida itoobiya sidoo kale wuxuu kamid yahay gobollada ugu horumarsan deegaanka Soomaalida itoobiya marka laga qiimeeyo waxbarashada, caafimaadka, biyaha, nabadgaliyada, maamul wanaagga, horumarinta xoolaha, iwm.
Gobolka afdheer waxaa dib u dejin webiyada jiinkooda ah loo sameeyey boqolaal qoys oo Ka faa'iideysta tabcashada beeraha iyo xoolahooda iyagoo nasiib u helay in nidaamkan ay uga faa'iideeyeen ubadkooda oo iskuulada Ka dhigta magaalooyinka waaweyn ee gobolka.
Haddaba sidee looga dareemay afdheer isticmaalka telefoonka gacanta (mobile) markii loo fasaxay bartamihii wiigii AAN Soo dhaafnay?
Dhalinyada Ree afdheer dal iyo dibad meel ay joogaanba waxay ku tilmaameen talaabo hore loo qaaday oo u horseedi doonta gobolku inuu sii laba-jibaarmo horumarkii Ka socday, dhanka kale guud ahaan shscabka reer afdheer ayaa ku tilmaamay talaabo farxad leh isticmaalka mobile-Ka.
Mashruucan isticmaalka telefoonka wuxuu Ka mid ahaa 12 qodob oo Hargeelle ku ballan qaaday madaxweynaha dds itoobiya inuu ku amri doono xukuumadda DDS Itoobiya iyo inuu ku dhiirigalin doono dowladda dhexe ee itoobiya oo iyadu qaabilsan isgaarsiinta, biyaha, jidadka iwm.
Qodobada la sheegay in ay Ka codsadeen reer afdheer madaxweynaha dds itoobiya cabdi m. Cumar xilligii uu booqanayey afdheer waxaa Ka mid ahaa:1. In gobolkan loo fasaxo isticmaalka mobilka iyo internettka.2. In 4 degmo loo magacaabo, meelaha la sheegay in degmo loo codsaday ayaa kala ah UNKA, QOOXLE, GODGOD iyo AABAAQAROOW.3. In ismaamul goboleedyada dds itoobiya lagu daro Hargeelle caasimadda afdheer, ismaamulada dds itoobiya hadda Ka jira ayaa kala ah dhagaxbuur, jigjiga, qabridahare iyo godey.4. In gobolkan dds itoobiya u aqoosato gobol abni oo laga joojiyo u adeegsiga shacabkiisa qorshooyinka mucaaradka lagula diriro.5. In gobolkan loo qeybiyo laba gobol maadaama uu Ka baaxadweyn yahay 3 gobol oo Ka mid ah kuwa hadda Ka jira dds itoibiya.6. In maamulka heer kilil reer afdheer Ka helaan qeybtooda maadaama aysan saamigooda ku haysan hadda xukuumadda ka jirta dds itoobiya.7. In isbitaalka dds itoobiya ugu weyn ee ku yaala Hargeelle la tayeeyo si looga kaaftoomo in caafimaad loo raadsado mandheeraa.8. In jidad loo sameeyo degmooyinka AAN laheyn jid jaay ah oo isku xira laba degmo ama degmo ilaa degmo gobolkan maadaama xilli roobku hakad galaan baabuurta isaga gudba degmooyinka qaarkood.9. In loo dhiso college si ay caruurta waxbarashada uga yimaada miyiga iyo tuulooyinka beerahu u helaan hoy iyo waxbarasho.10. In Hargeelle laga dhiso xarun weyn ama saylad weyn oo lagu kala iibsado xoolaha maadaama gobolkan ku dhaqan yihiin xoolo AAD u badan.11. In xarunta gobolka ee Hargeelle loo hagaajiyo garoonka diyaaradaha loona fasaxo in ay helaan duulimaadgada Ethopian Airlines ee dalka gudahiisa ah si looga kaaftoomo safar dheer.
Shacabka gobolka afdheer ayaa ah shacab go`aansaday in gobolkoodu ahaado nabad iskana fogeeyey wax kasta oo khalkhal galin kara abniga gobolkan.
FG- VIDEO yadan waa kuwo hore waxaanse idiin ballan qaadaynaa in aanu dhawaan idiin soo daabici doono sawiro iyo VIDEO laga soo duubay degmooyinka gobolka afdheer qaarkood.